Ereyga Yuhuuda waligeed ma adeegsan Laanta Afka Somaliga ee BBC-da ”Xog Rasmi ah” - iftineducation.com
Ereyga Yuhuuda waligeed ma adeegsan Laanta Afka Somaliga ee BBC-da ”Xog Rasmi ah”
aadan21 / December 6, 2012
iftineducation.com – Hay’ada Warbaahineed ee BBC-da waxa ay ka kooban tahay seddex qeybood,Tv-ga la iska arko,Raadiye dadku dhageystaan iyo Website la akhristo luuqado kala duwanba haku baxaane.
Waxaase ay ka kooban tahay dhowr qeybood waxaa inaga ina quseeya laanta afka somaliga ee BBC-da,adeegsiga iyo eray bixinta waxa loogu dhawaaqaa sida luuqadaha kale u akhriyaan hadii diin ahaan aysan wax dhibeyn.
BBC-da oo 60 sano kabadan soo shaqeynaysay gaar ahaan qeybta afka somaliga wax ku tabisa ayaa markii ugu horeysay waxa manta ka baxay erayga Yuhuuda oo mamnuuc ka ahayd adeegsigeeda wariyeyaasha BBC-da.
Inkastoo aan si hoose ula socon waxyaabaha loogu diiday inay adeegsadaan ayaa hadana Maalintii Talaadada 3 December 2012 barnaamijkii duhurnimo markii uu soo koobayey qodobada wararka ugu doorka roon waxaa la maqlay Yuhuuda.
Wariyaha lagu magacaabo Cabdullaahi Xaaji ayaa Qodobada wararka ugu doorka roon akhrinayey waxaase uu yiri maamulka Yuhuuda isagoo si farsameysan hadana uyiri maamulka isra’iil taa oo ka dhigan inuu god ku dhacay.
Laanta afka Somaliga ee BBC-da waa mid sharci ahaanteyda wararka ka baxa ay aad u’adag yihiin marka la eego warbaahinta kale ee dunida ku taalla ee af somaliga wax ku tabisa.
Inkastoo khalad aan lagu tilmaami Karin hafyada uu galay C/llaahi Xaaji hadana eray bixin cusub buu la yimid waxaana la isweydiinayaa ma waxaa is badalay adeegsigii eray bixinta mise xaaji baa simbirirxaday?
BBC-da hadda waxaa agaasime ka ah C/raxmaan Maxamed Adan (Koronto) kaasi oo badalay Yuusuf Garaad Cumar oo isagu shaqadaasi ka tagay markii uu isku sharaxay madaxtinimada Somaliya walaw uu guuldareystay.
Ninyahoow Xiliga Haasaawaha Ka fogoow Qodobadaan Sababayo In Lamaanahaada Aay Ku nacdo Sida…
Halkeey ku Dambeeysaa Orodyahanadii Soomaaliyeed ee Zamzam ( VIDEO CUSUB )